चार महिने शिशुसहित एकै परिवारका १८ जनाले जिते कोरोनालाई « Naya Page
देशभर १०५ कोरोना संक्रमित निको, ६०३ संक्रमित
प्रकाशित मिति : 25 May, 2020 8:47 am
वीरगञ्ज, १२ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुने मात्र नभई यसलाई जित्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
हिजो आइतबार राति वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट चार महिने शिशुसहित एकै परिवारका १८ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । दुई पटक स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।
डिस्चार्ज हुनेमा चार महिने शिशुदेखि ६२ वर्षकी वृद्ध महिलासम्म रहेको अस्पतालले जनाएको छ । डिस्चार्ज हुनेमा सात महिला र ११ पुरुष रहेको अस्प्तालका फिजिसियन डा. उदयनारायण सिंहले जनाए । उनीहरु वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वासिन्दा हुन् । आइतबार राति करिब ११ बजे उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो ।
चिकित्सकका अनुसार उनीहरु कसैमा पनि कोरोनाको लक्षण देखिएको थिएन । शनिबार मात्र नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डबाट पर्सा, बारा र रौतहटका ९ जना कोभिड १९ का बिरामी निको भएर डिस्चार्ज भएका थिए ।
नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन र अस्थायी कोरोना अस्पताल गरि वीरगन्जमा अझै ७२ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । पर्सा निवासी एक संक्रमितको बाराको कलैयामा उपचार भइरहेको छ ।
योसँगै पर्सामा मात्रै कोरोनालाई जित्नेहरुको संख्या २५ पुगेको छ भने देशभर निको हुनेको संख्या १०५ पुगेको छ । हालसम्म नेपालमा ६०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाँके, सिन्धुपाल्चोक र गुल्मीका एकरएक गरी हालसम्म तीन जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं, २१ असार । कृषि विकास बैंकको वित्तीय प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच राखी विभिन्न व्यक्तिको खातामा